ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( World Tourism Day အကြို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( World Tourism Day အကြို)
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( World Tourism Day အကြို)
Posted by ကထူးဆန်း on Sep 26, 2012 in Opinion - Op-ed, Travel | 33 comments
မနက်ဖြန် ၂၇-၉- က World Tourism Day ပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံ က ပထမဆုံး အကြီမ် အထိမ်းအမှတ် နေ့ လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည် ။ဟိုတယ်ခရီး ၀န်ကြီး ဌာနမှ နေပြည်တော် တွင် အထိမ်း အမှတ် နေ့ အဖြစ် အစည်းအဝေး ခေါ်ထားကြောင်း သိရပါသည် ။ ဘာတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အဆိုအမိန့်တွေ လုပ်မည် မသိသော်လည်း ကထူးဆန်းကတော့ မိမိဘာသာ အဆိုတင်သွင်းလိုက်ပါသည် ။
(၁) credit card တွေ အမြန်ဆုံး သုံးစွဲ နိုင်ရေး နှင့် ထောင်မလဲ သဲကော် ငွေစက္ကူ သာ လက်ခံချင်သော နိုင်ငံ အဖြစ်မှ အမြန်ဆုံးကင်းလွတ်ရေး။
မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေမှာ ဟိုတယ် ဈေးနုန်းတွေ တက်တာ ထက်အမြဲတမ်း ငြိုငြင်ခံရတဲ့ ကိစ္စပါ ။ သူတို့ နိုင်ငံမှာ မလာခင် us dollars အသစ်တွေ ရှာရတာ သူတို့ အတွက် ဒုက္ခ တစ်ခု ပါ ။ CB ဆို ရင် ဈေးလျော့တာ ၊ နဲနဲ နွမ်းရင် ၊ တံဆိပ်တုံး ပါနေရင် ၊ ခေါက်ရိုးကျိုး နေရင် ၊ ခဲခြစ်ရာ အမှတ်အသားပါနေရင် လက်မခံကြတာ ၊ ငွေ လဲလှယ် နုန်းလျော့ ပေးတာတွေ ဟာ သူတို့ကို စိတ် ဒုက္ခပေးပြီး နောက်ဆက်တွဲ အဆင်မပြေ မကျေချက်တွေ ပိုများ စေပါတယ် ။ကိုယ့်နိုင်ငံ ငွေစက္ကူတွေကျတော့ ဖာတစ်ရာ နဲ့ တိပ် နဲ့ ကိုင်ရ မှာ တောင် မသဒီ စရာ ဖြစ်နေတာ တွေ ကို တွေ့တော့ နိုင်ငံခြားသားများ နဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ ၀န်ထမ်းများ လည်း တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်ပါတယ် ။ သူတို့ပေးတဲ့ ငွေ မယူလို့ နိုင်ငံခြားသားများရဲ့ ဆူပူခြင်းခံရပါတယ် ။ ယူမိလို့ အလုပ်ရှင် ရဲ့ ကြိမ်းမောင်းခြင်းခံရပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားသားက တစ်ခါ ဘဲ တွေ့မှာ ။ အလုပ်ရှင်က နေ့တိုင်းတွေ့ရမှာ ဆိုတော့ အလုပ်ရှင် စကား နာယူပြီး လက်မခံကြတဲ့ အတွက် ဧည့်သည်များ ရဲ့ ဆူပူ ခြင်းများ နေ့စဉ်နီးနီး ခံကြရရှာပါတယ် ။
Credit Card မသုံးစွဲ နိုင်တဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံ ယူလာရာမှာ စိတ်မချတာတွေ ၊ မလောက်မှာ စိုးရိမ်တာတွေ နဲ့ နိုင်ငံမှာလည်း ရသင့် သလောက် ၀င်ငွေ မရ ဖြစ်နေရပါတယ် ။ အခုတော့ ၂၀၁၃ လောက်ဆို credit card တွေ သုံးစွဲလို့ ရမယ် ဆိုပေမဲ့ ယုံရမှာလား ဟင် ဖြစ်နေရပါတယ် ။
ဘဏ်တွေမှာ ငွေ လဲလို့ ရနေပါပြီ အသံကောင်း ဟစ်နေတာ တနှစ် မကတော့ပါဘူး ။ လဲလို့တော့ ရပါတယ် ။ သတ်မှတ် ပမာဏ တစ်ခုဘဲရပါတယ် ။ လူတစ်ဦး တစ်ရာ နှစ်ရာ လောက်သာ ရပါတယ် ။ တစ်ခါ ကုမ္မဏီ မှတ်ပုံတင်ယူခဲ့ ဆိုပြီး တစ်ခါတော့ တစ်ထောင် လဲခွင့်ရပါတယ် ။ အဲ့ဒီလိုပုံနဲ့ အလုပ် ဘယ်လိုလုပ် ဘဏ်တွေကို ယုံကြည်ရမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး ။
နိုင်ငံခြားကနေ ငွေလွှဲလို့ ရပြီဆိုလို့ မေးကြည့်တော့လည်း တစ်ရာ နှစ်ရာလောက်ပါတဲ့ ။ မနေ့ ကတော့ တစ်ထောင်လောက် အထိတော့ ရမယ် ပြောသံကြား လို့ အီးနံ့ရတဲ့ အကောင် လိုဘဲ ၀မ်းသာ အားရ စာရင်းဖွင့်ဖို့ လုပ်နေရပါတယ် ။ စာရင်းဖွင့်တော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း တောင်းလိုက်တဲ့ စာရွက်စာတန်းတွေ ။ ကုမ္မဏီ အစည်း အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ မှတ်ပုံတင် ၊ Form6, 26 လျှောက်လွှာ ၊ အစုံပါဘဲ ။
အပြင်မှာကော ။ ဘယ်နိုင်ငံက လွှဲမလဲ ။ ဘယ်လောက် လဲမလဲ ။ ကြိုက်သလောက်လွှဲ ၊ ကြိုက်သလောက် ရောင်းလို့ ရနေပါတယ် ဆိုတော့ ၀န်ကြီးများ ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေးခွန်းမထုတ် တော့ဘူးလား လဲ သိချင်မိပါရဲ့ ။
ယနေ့ ပေါက်ဈေး ။ (၂၆-၉-၂၀၁၂)
အပြင်ဈေး .. 1 USD = 842 ကျပ် ။ ငွေလွှဲကောင်တာ ။ ၈၅၄ ကျပ် ။ sms message မှ ပို့သောဈေး= Forex USD rate= 862 kyats /
၂။ စစ်ဖြစ်နေသော ဒေသများမှ လွဲ၍ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ရရေး ။ ၀င်ထွက်ခွင့်ရရှိရေး ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှ တဆင့် (သို့) သို့ မှ တဆင့် အခြား အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများသို့ ၀င်ထွက် လိုသူများ ရှိပါတယ် ။
ဥပမာ – တာချီလိတ်က ၀င်ပြီး ရန်ကုန်မှ ပြန်ထွက် (သို့) မူဆယ် မှ တရုတ်ပြည် စသဖြင့် သွားလာ လိုသူများ ရှိပါတယ် ။ အချို့လည်း ရန်ကုန် မှ ၀င်ပြီး မြန်မာပြည်လည်ပါတ် ။ ကျိုင်းတုံ တာချီလိတ်မှ တဆင့် ချင်းမိုင် ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ သွားချင်သူများလည်း ရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ၀င်ထွက် သွားလာ နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသင့် သည့် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ သွားချင်လျှင် သွားခွင့် မရသေး (သို့) သွားခွင့် တင်ရတဲ့ ဌာနေ တွေ ရှိပါသေးတယ် ။ ဒါတွေလည်း ဖွင့် ပေးသင့်ပါပြီ ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က သံတွဲ ငပလီ နဲ့ စစ်တွေ မြောက်ဦးကိုတော့ မာရှယ်လော ပြန်ရုတ်ပေးမယ်လို့ ကြားမိတဲ့ အတွက် တော့ ကြိုဆိုပါတယ် ။
၃။ ခရီးသွာ: အကြောင်းပြု လို့ မြေသိမ်းမှု့များ လျော့နည်း ရေး ။
ကထူးဆန်း ကတော့ ဥာဏ်ရည် နဲသူမို့ တစ်ကယ် နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဟိုတယ် ဇုန်တွေ ဖော်မယ် ဆိုပြီး မြေသိမ်းဖို့ ကြံစည်နေတာကို ပါ ။
ဟိုတယ် တွေ မလို အပ်ဘူး မဟုတ်ပါ ။ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ သိမ်းမဲ့ မြေဧက တွေ လောက် လိုပါ့မလားဆိုတာပါ ။ မန္တလေးဆိုရင် ဧက ငါးထောင်ကျော် ၊ အင်းလေး ဆိုရင်လည်း ဧက ရာချီ သိမ်းကြမှာပါ ။ ၀န်ထမ်းတွေ နေအိမ်ဆောက်ဖို့ ၊ ကျောင်းဆောက်ဖို့ ဘာညာ အကြောင်းစုံပြလို့ သိမ်းမလို့ လုပ်တာ တကယ် ကို နားမလည် နိုင်ပါဘူး ။ Sedona လို ဘက်ပြဲ ကြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဟိုတယ် က ၉ ဧက သာသာ ဘဲ ရှိပါတယ် ။ အထပ် ၁၂ထပ် ဆိုပေမဲ့ ၁၂ ထပ်မှာ ဘာအခန်းမှ မရှိပါဘူး ။ ထားပါ ။ အဲ့ဒီမှာ အခန်းရေ ၃၆၀ ကျော် ရှိပ်ါတယ် ။ တစ်ကယ်တော့ စဆောက်တုန်း က လေးရာကျော်ပါ ။ အခြေအနေ မကောင်းလို့ long stay apartment တွေ ထည့် လိုက်လို့ အခန်း ၃၆၀ ကျော် ဖြစ်သွားတာပါ ။ အဲ့ဒီလို အလုံးရေ တစ်ရာဘဲ ဆောက်ဦး ။ အခန်းရေ လေးထောင်ကျော် ထွက်လာမှာ ဖြစ်သလို ဧက ၉၀၀ သာ ကုန်မှာပါ ။ ဒါက ဆီဒိုနားလို ဘက်ပြဲဆောက်မှ ။ Traders လို သိုသိုသိပ်သ်ိပ် business hotel အထပ်မြင့် ဆောက်မယ်ဆို ဒီလောက်တောင် မလိုပါဘူး ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ဧက တွေက ..
၄။ Outbound Tour Operator များ အမြန်ဆုံးခွင့်ပြုရေး
သိသလောက်တော့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ out bound tour operator လိုင်စင်များ ချမပေးထားပါဘူး ။ ယခု လက်ရှိလုပ်နေသူတွေ ဟာ တရားမ၀င်ပါဘူး ။ စည်းကမ်းလိုက်နာလို့ တရားဝင် ဘောင်ဝင် အရှုပ်အရှင်းကင်းစင်စွာ လုပ်ချင်သူ တွေမှာ လိုင်စင် ချပေးခြင်း မရှိသည့် အတွက် စည်းကမ်း မလိုက်နာ သူတွေ လုပ်ရဲသူတွေ လုပ်စား နေသလိုဖြစ်နေတာတွေကို စည်းဝင်ဘောင်ဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့်များ ချပေးသင့်ပါသည်။
၅ ။ Visa Extension တိကျသော ၀ါဒ လမ်းညွှန်မှု့ နေရာ သတ်မှတ်ပေးရေး ။
မြန်မာ ပြည်မှာ အပျော်လွန်ပြီး သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်သွားသူများလည်း ရှိပါသည် ။ ထိုသူများ မှ visa extension လုပ်ဆောင်လိုသူများ အတွက် တိကျသော မှုဝါဒ ။ စည်းမျည်း ၊ နေရာ တို့ သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်နေပါသည် ။ visa ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ဟိုတယ်များ မှ လက်ခံခြင်း မပြု ကြပါ ။ ဟိုတယ်တွင် နေထိုင်လျှက် ရှိသူများ အား visa ရက်ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ထွက်ခွာ ခိုင်းပါက ထွက်ခွာခြင်းမရှီ ဘဲ ဟိုတယ်များနှင့် စကားများ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကြပါသည် ။ airport တွင် တစ်ရက် သုံးဒေါ်လာ ပေး နေနိုင်သည် ဆိုကာ နေကြပါသည် ။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများသို့ အကြောင်းကြား ခဲ့လျှင်လည်း အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှီပါ ။ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်မှု visa ရက်ကျော်နေမှန်းသိလျှက် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် လက်ခံရပါသလဲ ဆိုကာ ဟိုတယ်ငယ်ပိုင်ရှင်များ ဖြေရှင်းမရ အရစ်ခံရပါသည် ။
World Tourism Day အား ကြိုဆို ရေးသားလိုက်ပါသည် ။
ခဲ နှင့် ပေါက်ကြပါ ။
လက်ရှိအချိန်မှာ tourism အပါအ၀င် industries တွေအားလုံးအတွက် ကန့်လန့်ကြီးခံနေတဲ့ ကိစ္စတခုက ငွေလဲလှယ်တာကို အခုထိ ချုပ်ကိုင်ကန့်သတ်နေသေးတာပဲဖြစ်တယ်။
သူတို့ဒီလိုလုပ်တာဟာ မြန်မာငွေ တက်မသွားအောင် / ငြိမ်အောင်လုပ်တာဆိုရင် အဲဒါနည်းလမ်းအမှားနဲ့ လုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ သူများအစိုးရတွေဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာ လေ့လာမေးမြန်းပြီး သူများလိုလုပ်သင့်တာပါ။
အခုဟာက လွတ်လပ်တဲ့ငွေကြေးဈေးကွက် မဖြစ်တာကြောင့်
ဧည့်သည်တွေအတွက် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု့တွေကို သင့်လျှော်အောင်ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။
:hee: :harr: :harr:
ဒီအဆိုပြုချက်တွေနဲ့စောစောစီးစီးကြို တင်သင့်တယ် ထင်တယ် စီဂျေကြီးရ
စီဂျေရဲ့ အစိုကို ကျော် ထောက်ခဲ့ပါတယ်..အဲ..ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်
ခဲနှင့်ပေါက်ခိုင်းတာ ဘယ်သူ့ကိုလဲ ကထူးဆန်းကိုလား နောက်တာ
အဲ့ဒီ ခရက်ဒစ်ကတ်တွေ သုံးလို့ရသွားရင် ဟိုဘက်ရော ဒီဘက်ရော အတော်အဆင်ပြေသွားမယ်နော် ခရီးသွားလုပ်ငန်းက။ ဆီဒိုးနားကြီး တလောက မကောင်းသတင်းနဲ့ ကျော်ဇောနေတာကြီးရော အဆင်ပြေသွားပြီလား မသိဘူး။
တနိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ရေးဆိုလို့ ပြောရအုန်းမယ်။ ချိုင်းနားဘက်မှာ မူစယ်က သွားရင် အရင်ကလို ဟိုးအတွင်းဘက်ထိသွားလို့ မရတော့ဘူး။ လေယာဉ်နဲ့ သွားမှ အဆင်ပြေတော့တယ် ပြောတယ်။ သူတို့ကလည်း အားကျမခံပိတ်တယ်ထင်ရဲ့။ ပိုက်ဆံပေးလုပ်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်တချို့လည်း ဖျက်သိမ်းခံရတယ် ပြောတယ် ။ အတော်များများ ကြားလိုက်ရတယ်။
ဗီဇာ အိတ်စ်တန်းရှင်းဆိုလို့ မေးရအုန်းမယ် ။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ ဗီဇာမလိုဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာက ဘယ်အချိန်မှ စအသက်ဝင်မှာလဲ ။ သတင်းလေးများ ကြားရင် မျှပါအုန်း ကထူးဆန်း။
ရွာထဲ မျက်စိနောက်စရာ ဖြစ်အောင် ရေးချင်တာ ရေးထားလို့ပါ pooch ရေ ။
ှဆီဒိုနား G.M ပြောင်းရ၇င်တော့ ၀န်ထမ်းတွေ က ၀မ်းသာမှာ ။ ပြောင်းသွားရလား တော့ မသိပါဘူး ။ မမေးမိသေးဘူး ။
အာဆီယံကတော့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကိုပြောတာလား ? အာဆီယံ နိုင်ငံ တစ်ခု မှ တစ်ခု ကူးရင်လား ၊ မဲခေါင် နိုင်ငံတွေ သွားရင် ဗီဇာ တစ်ခု ဘဲ လိုမယ် လည်း ပြော နေကြပါတယ် ။ ဘယ်တော့ အကောင်အထည် စဖော်မလဲတော့ မသိသေးပါဘူး ။ ကြားရင် မျှပါ့မယ် ။
ခဲနဲ့လား..ပေါက်ချင်တယ်…ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စောစောစီးစီးကတည်းက ဘာလို့ မရေးတာလဲလို့…
(၁) ပိုက်ဆံတွေကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ကြည့်ပြီး စစ်နေတာကို ဧည့်သည်တွေက တအံ့တသြကြည့်နေရင် အားနာသလိုလို၊ ရယ်ချင်သလိုလို…
ခေါင်းကျိုးတာလေးပါလို့၊ မင်စက်လေးတွေလို့ ပြန်လဲခိုင်းချင်ရင် ဘယ်လိုစပြောရပါ့မလဲ ဆိုပြီး မျက်နှာကြည့်ရတာတွေ…
ပိုက်ဆံပြန်လဲခိုင်းလို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီး ငါတို့တစ်နိုင်ငံတည်း သုံးလို့မရတာပါလို့ ခပ်တည်တည်ပြောရတာတွေ…
ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုပေးလိုက်လို့ သူတို့က complain တက်လာရင်… ဒါ ငါတို့ပြည်တွင်းက ပိုက်ဆံ၊ ပြည်တွင်းမှာ နေရာတိုင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီး မျက်နှာပြောင်တိုက် ပြောရတာတွေ…
(၂) ခုပိတ်လိုက်၊ ခုဖွင့်လိုက်နဲ့ .. နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်..ခုတစ်မျိုး၊ တော်ကြာတစ်မျိုး.. ဘာမှလာပြောမနေနဲ့.. တစ်နေရာပိတ်လို့..ဖွင့်တဲ့နေရာတွေမှာ ဧည့်သည်တွေပြုံပြီး အိပ်စရာမရှိရင်…အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်…က်.
အဲ..အဲ.. စီဂျေကြီး… home stay ကိစ္စလေးရော ပြောပေးချင်စိတ်မရှိဘူးလားဟင်…
ကျန်တာတော့ တမီးလည်း သိပ်မသိတော့ဘူး..
ဟိုတယ်တွေ သ်ိပ်ကြပ်လာရင်တော့ home stay ခွင့်ပြုမယ်လဲ ပြောတာဘဲ ။ မွန်မွန်ပြောသလိုဘဲ နှစ်မျိုးဘဲ ရှိတာဆိုတော့ လုပ်မှ လုပ်ပြီဘဲ ပြောရဲတော့တယ် ။ online visa တွေ တိုးရစ်တွေ အတွက် ပေးတော့မယ် ဆိုပြီး သတင်းတွေ တွေ့မိခဲ့လို့ အပြောစောမိခဲ့လို့ မျက်နှာပူခဲ့ရခဲ့ပြီးပြီ။
ခရီးသွားတွေ ပိုပိုပြီး ရောက်လာကြတယ် …
ဒါကြောင့် ခရီးသွားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျသေချာမှုတွေ လိုအပ်လာပါပြီ ..
ခု စီဂျေဂျီး ဥထူးဆန်း တင်တဲ့ အဆိုတွေကိုလည်း ဖြစ်သင့်တာတွေချည်းပါပဲ ..
ဒီတော့ ကျုပ်ကလည်း ထောက်ခံပါတယ် ….
ပြီးတော့လည်း World Tourism Day ကို ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း …
စီဂျေ ကိုထူးဆန်းကို မန်းဂေဇက် လိုဂိုပုံဗီနိုင်း နဲ့ ဝတ်စုံချုပ်ပေးပြီး
“ ဗစ်စစ်မြန်မာရီးယား 2013 ” လို့ အော်ကာ က နေပုံကို မြင်မိချင်ကြောင်းရယ်ပါ
အဲဒီ့တော့မှ ခဲ နဲ့ တကယ် အပေါက်ခံရမှာ :hee:
တိုက် ..ကိုခဲနဲ့ ပေါက်တော့ ….အဖိုးကြီးထွက်လို့လာ ….ဟေးဟေး
လုပ်ထားကွ ဒါမှ CJကြီး …..
Crd Card ကတော့.. ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်မသိ…။ ဒီခေတ်က လိမ်သူတွေပေါပါဘိနဲ့.. ။အရင်ကလို… ကော်ပီကူးပြီးမှ.. နောက်မှ ငွေယူယုံနဲ့.. မလွယ်ရေးချမလွယ်..။
ကြားက.. အာမခံတခုခုရှိဖို့လိုမယ်… ထင်မိတယ်…
အဲဒီဘစ်ဇနက် စိတ်ဝင်စားသမို့.. နည်းနည်း.. ဆွေးနွေးချင်သား…
သူကြီးရေ ဘယ်လို လိမ်တတ်တယ် ဆိုတာလေး မျှဝေပါဦး .. ဒါမှ ရောက်လာခဲ့ရင် သတိထားနိုင်မှာ.
လောလောဆယ်.. ရန်ကုန်က ဘယ်လိုလုပ်နေသလည်း.. လုပ်ခဲ့သလည်း.. မသိ.
ခရက်ဒစ်ကဒ်သုံးရင်.. Zip code တောင်းနေပြီ..။ အဲဒါက ကဒ်ပိုင်ရှင်ရဲ့.. Billing လိပ်စာကိုစစ်တာပါ..။ ဘာမှငွေပမာဏမရှိတဲ့.. Redbox ကနေ ကရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့.. အခွေငှားရင်ကို.. ဇစ်ကုဒ်တောင်းကုန်ပြီလေ..။
အွန်လိုင်းဝယ်ရင်တော့.. Security code ဆိုပြီး.. ကဒ်ရဲ့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့.. ကုဒ်ကို မျက်မြင်ကြည့်ထည့်ခိုင်းတယ်..။
ကဒ်နံပါတ်..နာမယ်တွေက.. ဟက်ကာတွေသိန်းသန်းချီခိုးထားတာရှိလို့ပါ..။ သိသလောက်.. တချို့.. ကဒ်နံပါတ်တွေ ပြန်ရောင်းကြတာမှာ.. ဈေးက..ကျလာလိုက်တာ.. တခုကို အခုဆို.. ၂၅ဆင့်တောင်တန်သေးရဲ့လားမသိ.. ။
Jun 17, 2011 – At an online megamall, criminals buy and sell huge lists of stolen credit card numbers. To get in, you need references from other criminals.
ကဒ်ရဲ့နောက်က.. အမဲစင်းလေး(ကဒ်ဒေတာတွေထည့်ထားတဲ့သံလိုက်ပြား၊ချပ်စ်တွေ)ကို .. ကော်ပီဆွဲလို့ရတဲ့.. စက်တွေပေါ်နေတယ်..။
Scam Alert: Hands-Free Pickpocketing; Electronic Readers Get …
Jan 17, 2011 – If you carry credit or debit cards embedded with “smart chips,” some of …asmall reader device near people’s pockets and handbags to read the …
ကော်ပီအဆွဲခံရပြီးရင်.. အဲဒီကနေ ငွေခိုးသုံးကြတာကိုး..
ဘီလ်က တလပြည့်မှလာတတ်တော့.. ကြားထဲပြဿနာဖြစ်ရော…။
ကဒ်ပိုင်ရှင်တွေက.. ကဒ်ပြားခိုးခံရပါတယ်ဆိုပြီး.. ငွေတောင်းစာရောက်မှ.. ငွေမပေးပဲ.. ဒီကလိုင်းလုပ်လို့လည်း ရပါတယ်..။
ဒါကြောင့် ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ သုံးရာမှာ.. ကရက်ဒစ်ယူနီယံနဲ့ဒါရိုက်ချိပ်ထားတဲ့.. စနစ်နဲ့.. စိစစ်နိုင်မှ.. တော်ကာကျမယ်ထင်မိတယ်..
ဒါရိုက်ချိပ်ထားတော့.. ခိုးခံထားရသလား..။ တိုင်စာတက်ထားသလား.. ငွေလိမစ်ပြည့်နေပြီလား.. ပိုင်ရှင်အစစ်လား.. စသဖြင့် သိသာနိုင်လို့ပါ..။
ငွေပေး..ငွေယူမှာ.. ကြားထဲက..အာမခံ escrow လုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်တဲ့.. paypal လိုစနစ်မျိုးလည်း.. ရှိပါတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာ.. အဲလိုကနေ..အာမခံ လုပ်နိုင်ရင်တော့.. ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..။
ိကိုထူးဆန်းရေ မြန်မာ့ tourism တိုးတတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုထူးဆန်းရဲ့ အဆိုတင်းသွင်းချက်တွေ တကယ့်ကိုအရေးပါလှပါတယ် … အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။
(၁) visa card ကိစ္စကတော့ ၂၀၁၃ လို့ပြောကြတာပါ။ ဆိုတော့ကာ ကိုထူဆန်းပြောခဲ့သလိုပဲ ဒေါ်လာကိစ္စအရင် အဆင်ပြေရင်တောင် တော်တော်ဟုတ်နေပါပြီ။ ဒီမှာသုံးလို့မရလို့ပါဆိုတော့၊ ဒီမှာမရင် နိုင်ငံခြားမှာသုံးပေါ့တဲ့။ အဲ့လို ဧည့်သည်မျိုးနဲ့တွေ့ရင် အတော် အကျပ်ရိုက်ရပါတယ်။ တစ်ခါက မက်ကဆီကန်ဧည့်သည်တွေ ဟိုတယ်မှာ ကိုယ့်ဂိုက်နဲ့တွေပြီး ရုံးကိုရောက်လာပါတယ်။ အတင်းလည်ချင်တယ်ဆိုလို ခရီးစဉ်ညှိပြီး ကားနဲ့ ဂိုက်နဲ့ ရန်ကုန်အရင် လည်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ booking တင်လိုက်အုံးမယ်။ နေ့ခင်းပြန်လာခဲ့လို့မှာလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပိုက်ဆဲလည်းပေးရော ဒေါ်လာတွေတော်တော်များများက အခြေနေအရမ်းဆိုးနေပါတယ်။ လဲခိုင်းတော့လည်း အများကြီးဖြစ်နေတော့ မလဲပေးချင်တော့ပါဘူး။ တကယ်လည်းသူတို့ဆီမှာ မြန်မာ့စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတာ ပါမယ့်ပုံလည်းမပါပါဘူး .. ခတ်တာက ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကျော်ဆိုတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ပြသနာ။ နောက်ဆုံးဧည့်သည်က စိတ်ဆိုးပြီး ယူချင်ယူ၊ မယူချင်ရင် မပေးရုံပဲဆိုတော့ကာ၊ ကိုယ်မှာ ကားနဲ့ဂိုက်ကလည်းနေ့ဝက်သုံးပြီးသားဆိုတော့ကာ၊
(၂) ဟုတ်ပါတယ်။ ခုဆို peak season စတော့မယ်။ သံတွဲနဲ့စစ်တွေ မာရှယ်လောရုတ်သိမ်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါပြီ။ ရုတ်သိမ်းရလောက်အောင်လည်း ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ နာဂစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကိုသွားရင် အရင်ကစာတင်ရပါတယ်။ ခုလောက်ဆိုရင် တင်ရလောက်တော့ပါဘူးနော်..???
နယ်စပ်ထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ထားရတာဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေတာပါဘဲ။ အမှန်တကယ်လည်း တချို့နေရာတွေမငြိမ်းချမ်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားပြီးပြီမဟုတ်လား… တာချီလိတ်ထွက်ပေါက်ပြန်ပွင့်သင့်ပါပြီ။ သွားရေးလာရေးလည်း ဧည့်သည်တွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တာချီလိတ်မှာလေယာဉ်ကွင်းရှိတယ်။ ချင်းမိုင်၊ချင်းဆိုင် ဆက်သွားလို့ရတယ်။ အဲပြီးတော့ နယ်စပ်ထွက်ပေါက်က အ၀င်ရောအထွက်ရောဒီကပဲဆိုရင်လည်း ခွင့်ပြုပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကတော့ ပြည်တွင်းလေယာဉ်တွေကောင်းဖို့၊ ခဏခဏမပျက်ဖို့။ booking confirmed ပေးပြီးမှ ဧည့်သည်နည်းလို၊့ vip ရှိလို့ cancel လုပ်ခံရတာတွေနဲ့လည်းဝေးစေချင်ပါပြီ။
အဲပြီးတော့ လမ်းတွေပါ … အထူးသဖြင့် ကမ်းခြေတွေကို သွားတဲ့လမ်းတွေ၊ မိတ္ထီလာကလော တောင်ကြောလမ်း …..စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ…အင်း………..
ကိုထူးဆန်းရေ ပြောချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အဲဒီအများကြီးထဲက ဘာတစ်ခုလေးပဲတိုးတတ် တိုးတတ် ၀မ်းသာအားရကြိုဆိုပါတယ်။
comment အရမ်းရှည်သွားလို့တောင်းပန်ပါတယ် ကိုထူးဆန်းရေ ….
ကျေးကျေးပါ aemoshu ။ ရှည်လေ ကြိုက်လေပါဘဲ ။ :hee: ကွန်မန့်နော် ။ ထပ်ရှည်ချင်သေးရင်လည်း၇ပါတယ် ။ အဲ့ဒါမှ အားမရသေးရင်လည်း ပိုစ် အနေနဲ့ တင်ပါဗျို့ .. :hee:
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို flight delay တွေ၊ flight cancel တွေ၊ လမ်းမကောင်းတာတွေ၊ ဘာတွေ ညာတွေ၊ ဟို စစ်ဒီစစ်တွေ. ကြားထဲကပဲ ဧည့်သည်ပြန်သွားလို့ သူတို့ဆီက Love Letter လေး ရောက်လာရင် မပျော်ဘူးလားဟင်…
(အမှန်တကယ် love letter ကို ဆိုလိုသည်… )
လုံမ ညည်းက love letter ကြိုက်တယ်ပေါ့လေ။ ကျုပ်ကတော့ဘာ letter မှမလိုချင်ဘူး။ ဘာကိစ္စမှမကြားရခြင်းကသတင်းကောင်းပဲတဲ့..ဟီး။
ဟုတ်တာပေါ့ညီမလေးရယ် … ဒီလိုနဲ့ပဲ အမောတွေပြေကြရတာပါပဲ။
ဦး CJ ကြီးရေ၊
World Tourism Day အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါမှာ ၀င်မပြိုင်ဘူးလား? ဦး CJ ကြီး ၀င်ပြိုင်ရင် ဆုရမှာ သေချာတယ်။
ညာဏ်မှီသလောက် လူပိန်းတွေးနဲ့ ပြောရရင်တော့ အခု ၀န်ကြီးဌာနအောက်မှာ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ ဦးဆောင်သူတွေဟာ တကယ့်ကို အများအကျိုးအတွက်၊ Tourism ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဦးဆောင်နေတဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့် Tourism ရဲ့ Business mind ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သလို၊ ဟိုတယ်ဇုန်ဟေ့လို့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ အလုအယက်မြေယာပိုင်ဆိုင်ချင်တာလေးတွေကိုလည်း ၀န်ကြီးဌာနက သမာသမတ်မျှတစွာ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။
တစ်ဘက်က ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ဒီအဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ Tourism ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လို့ဆိုရင်လည်း အခုအချိန်အထိ ဦးဆောင်သူအတော်များများဟာ အိတ်စိုက်လုပ်နေကြရပါတယ်။ သူတို့အတွက် fund ဆိုတာ မရှိတော့လည်း ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပဲ မျှော်လင့်ပြီး ငွေရင်းစိုက်ထုတ်ရတော့မှာပေါ့။
သူတို့ယှဉ်ယှဉ်ပြနေတဲ့ Thai က TAT ရဲ့ Fund နဲ့တော့ တခြားစီဖြစ်နေသေးတာကိုး။
UMTA နဲ့ MHA တို့ဟာလည်း အကယ့်ကို စည်းလုံးသင့်တဲ့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ သူအလှည့်၊ ကိုယ့်အလှည့်တွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ လျှော့ပြီး နှစ်ဘက်လုံး Greedy မဖြစ်ဖို့ လိုပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြောသလောက်တော့ အတော်မလွယ်တဲ့ case တွေပါ။
ဒါပေမယ့် ရပိုင်ခွင့်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကို စည်းလုံးကြပါတယ်။ ဥပမာ – Hospitality Industry ဆိုရင် FDI ကို ၁၀၀% မပေးရေး ကန့်ကွက်ကြတာမျိုးဆိုရင်ပေါ့။
လက်ရှိ ၀န်ကြီးဌာနက လူတွေကလည်း အခြားဝန်ကြီးဌာနတွေလိုပဲ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပြောတာ၊ မြှောက်ပေးတာတွေနဲ့ရယ်၊ တကယ့်ကို ဖြစ်သင့်၊ ဖြစ်ထိုက်တာရယ်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိ Background နဲ့ မလွယ်သေးပါဘူး။
ဒီတော့လည်း—– UMTA & MHA မှ လူများကို အားကိုးရင်းနှင့် ကောင်းသောအကြံညာဏ်များကို တကယ်လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအားဖြင့် ဦးCJ ကြီး တင်ပြထားချက်များကို အသစ်စက်စက်ဝန်ကြီးမှ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ပါစေလို့ —
The Winner ရေ ။ ဦးဆောင်သူ တော်တော်များများ တော့ မဟုတ်သေးဘူးထင်ပါတယ် ။ ဦးဆောင်သူ တော်တော်များများ က နေရာယူထားပြီး ရလာမဲ့ အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်နေကြတာပါ ။
အဲ့ဒီ့ အချက်က ဆိုးတာပါ ။ တိုးတက်ဖို့ အတွက် ဘာတွေ လုပ်ကြမယ် ဟေ့ မဟုတ်ဘဲ ၊ ဟိုး ဖုန်းပေးတဲ့ ခေတ်ကစလို့ သူဌေးကြီးများ ဖြစ်ပေမဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလဲ လက်ရှောင်ပေးဖို့ မစဉ်းစားဘဲ ငါယူမယ် ငါယူမယ် ဖြစ်နေကြတာ ၊ ကား ဟေ့ ဆိုလည်း ထိပ်ဆုံးက တန်းစီထားတာ ။ နဲနဲပေးပြီး များများ ပြန်ယူနိုင်အောင် ဦးဆောင်သူ နေရာ ယူထားတဲ့ သူများ ဖြစ်နေတာ ပါ။
အဲဒီ့ ကနေ ရလာတဲ့ အမြတ်တွေကလည်း နံမည်ယူ ပြန်လှုတာနဲ့ ကုန်တော့ အသင်းမှာ Fund ဆိုတာ မရှိသလောက် ဖြစ်နေတာ ။ ပြောရရင် တော့ မဆုံးနိင်ပေါင် ပေါ့ ဗျာ ။။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေကပဲ ရသွားကြတာချည်းပါပဲ…
Tourism ကြီး blooming ဖြစ်လာပြီဆိုမှ ပိုက်ဆံအထုပ်လေးပိုက်ပြီး သုံးဆဆိုလား ဘာဆိုလားနဲ့ ပေးယူသွားတာ..သူများတကာ ခြစ်ခြုပ်လုပ်လာတဲ့ ဟိုတယ်လေးကို…
ဦး CJ ကြီး ပြောတာနော်။ ကျွန်မ မပါဘူးနော်။။။။ ဟဲဟဲ နည်းနည်းပဲ အဆစွဲထုတ်မိလိုက်တာ။။
ကိုထူးဆန်းရယ် နိုင်ငံခြားငွေကိုသေချာဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ကြည့်တာတော့တကယ့်ကိုစိတ်ညစ်ရပါတယ်. အရင်က အပြင်မှာရောင်းတော့လည်းတချို့ပင်အပ်ပေါက်လာက်ရှိတဲ့မသိမသာအရာလေးတွေမယူလို့တခါတလေ ၄၊၅ကျပ်အလျော့နဲ့ရောင်းပေးလိုက်ရတာရှိတယ်. ကောင်တာတွေဖွင့်တော့ပိုဆိုးတယ်. စက်နဲ့စစ်နေပြီပဲတော်ရောပေါ့။ စဖွင့်စက ယူရိုတွေဒီလောက်မစစ်ဘူး. အခုတနေ့ကတင် ယူရိုတစ်ရာတန်က အသစ်ကြီး စွန်းနေလို့တဲ့မယူဘူး. တနေရာလေးမှာအရောင်နည်းနည်းမညီသလိုဖြစ်နေတာလေး မယူဘူးလေ။ အဲဒါထက်ပိုဆိုးတာ အက်ဖ်အီးစီ၊ MFTB ဘဏ်တံဆပ်နဲ့အထုတ်လိုက်ထုတ်လာတာကို ၂ရက်နေအပြင်မှာ ရောင်းတာအဲဒီလိုအစစ်ခံရတယ်. အရွက် ၄၀လောက်အပယ်ခံရတယ်. သူတို့ပြောတာဘဏ် ကသွင်းရင်မယူလို့တဲ့။ ကျမကိုအကြံပေးတယ်နောက်တခါငွေထုတ်ရင် ပိုက်ဆံအသစ်ရအောင် စာရေးကိုပေးရတယ်တဲ့.
ဗီဇာသက်တမ်းလွန်တွေကတော့ တရက်သုံးကျပ်ပေးကတရားဝင်ဖြစ်နေပြီကိုထူးဆန်းရဲ့ ကျမဦးလေးက တလောကစာရင်းထုတ်လိုက်တဲ့ လူ၂ထောင်ကျော်စာရင်းမှာ လက်ဆယ်ချောင်းတွင်း နံပါတ်စဉ်မှာပါတာ။ သူကစာရင်းမထွက်ခင်လာတာ. သူတောင် ၉ရက်လွန် ၂၇ကျပ်ပေးပြန်သွားတာအေးဆေးပဲ.
ဟုတ်ပါတယ် Crystalline ရေ ၊ သုံးဒေါ်လာ က တရားဝင်ပါ ။ သူတို့ မထွက်ခင် ပြဿနာ မတက်ရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ ပြဿနာ တက်ခဲ့ရင်တော့ ပေးနေရတဲ့ ဟိုတယ် ၊ အရစ်ခံရတော့တာဘဲ ။ အဲ့ဒီလူ မပြန်မချင်း ဟိုတယ် က ရင်တမမ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
လက်မ လက်မ ဟဲ့ လက်မ ဘယ်ရောက်နေသတုံး…။
ခရက်ဒစ်ကဒ်က … ထရိတ်ဒါးမှာ သုံးလို့ ရတာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ် … ။ ကျွန်မဧည့်သည်လာတိုင်း … ဟိုတယ်ကိုပိုက်ဆံရှင်းတဲ့အခါ ၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ သုံးတာ မြင်ခဲ့ဖူးလို့ပါ ။ Gold မန်ဘာမို့ပဲလား ဘာလားတော့မသိဘူး ။ နှစ်လ တစ်ခါလောက် ရန်ကုန်လာတိုင်း တည်းတဲ့ အပြင် ၊ တခြားနိုင်ငံကို biz trip ထွက်တိုင်းလည်း …. shangri-la ဟိုတယ်တွေမှာပဲ … တည်းခဲ့တာကြောင့်များလား မသိဘူး ။
နောက်တခေါက်ကျမှ စုံစုံစေ့စေ့ဖြစ်အောင် မေးကြည့်ဦးမှ ။
မှတ်သားမိသလောက် Visa ဈေးနှုန်းလေးများ–
Visit Visa – 20 USD [4 weeks]
Entry Visa – 20 USD [4 weeks]
Business Visa – 36 USD [10 weeks]
ဖြတ်သန်းခွင့် – Passing Visa – 18 USD [24 hours]
အကြိမ်ကြိမ်ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့် visa – 180 USD [within one year, maxi stay – 10 weeks per entry]
ရက်လွန်ကြေး –3USD per day
[90 ရက်ထက်ကျော်ပါက –5USD per day]
The Winner ရေ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဝင်ခွင့် visa ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာလေးလည်းသိချင်ပါတယ်။ The Winner (သို့) CJ ကြီး (သို့) လုံမလေး တို့ သိတဲ့လူလေး ဖြေပေးကြပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်နေတက်တဲ့ အမတ်တွေကို နားရွက်ဆွဲခေါ်လာပြီး
ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ခိုင်းရမယ်ဗျာ ………..
အဲဒီနေရာမှာပေ ၁၀၀ ပတ်လည်မြေတကွက်ကိုထူးဆန်းကိုပေးဖို့ရာထားပြီးပါပြီ